Ihe abụọ kpatara na ọbịbịa nke iMessage gam akporo | Gam akporosis
Ihe abụọ mere Apple agaghị eweta iMessage na gam akporo
Na mbido izu a a tụrụ anya na Apple ịkpọsa mbata nke iMessage gam akporo, mgbe imara ihe di n'elu, n'ihi asịrị, nke a na-eche na ndị nke Cupertino ga-akwadebe mwepụta nke ngwa izipu ozi ha n'elu ikpo okwu nke ha na ya na-asọmpi na afọ ole na ole siri ike.
E wezụga na-agbakwunye ọtụtụ ọhụrụ atụmatụ na ngwa na iOS 10, ebe a anyị na-agwa ndị nke anyị nwere na gam akporo, N'ikpeazụ ha ekpeghi ikpe maka agbakwunye nkwado gam akporo. The iPhone onye rụrụ kwuru abụọ doro anya ihe mere na ọ dịghị atụmatụ iji weta ya ozi ozi gam akporo.
Ihe mbu kpatara bu n'ihi na Apple na-eche echiche nke ya onye ọrụ nwere 1.000 ijeri nke ngwaọrụ ndị na-arụ ọrụ na-enye gị data zuru oke maka ohere mmụta ọ bụla maka AI ma ọ bụ ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ ga-arụ ọrụ.
Nke abụọ, na nke kachasị mkpa, bụ inwe a elu ozi n'elu ikpo okwu naanị ịrụ ọrụ na ngwaọrụ Apple ga-enyere aka na ngwaọrụ ndị ahụ. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị kpochapụwo na ihe ịga nke ọma echiche nke ụlọ ọrụ na nke ahụ bụ na ya onwe ya mfe echiche maka adịghị eweta ya iMessage gam akporo.
Eziokwu ahụ bụ na iMessage na-arụ ọrụ na ngwaọrụ Apple bụ otu n'ime isi ike ya maka ụlọ ọrụ yana ihe kpatara ọ ji agba ndị ọrụ ume iji iPhone. A ghaghi ikwu ya na Apple bu ulo oru dabere na ọrịre nke ngwaike. Ọ bụ ihe kpatara ha ịbụ na ihe kpatara ha ji ree ọtụtụ ijeri ngwaọrụ na Macs nwere iOS, na ịnwe ngwanrọ pụrụ iche maka ngwaike ahụ bụ ihe na-adọrọ mmasị na ire ere maka ha.
Nke a bụ ezigbo ihe kpatara na anaghị ewetara iMessage gam akporo, ebe ọ bụ na n'ikpeazụ ga-emerụ ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ihe abụọ mere Apple agaghị eweta iMessage na gam akporo
jorge pineda dijo
Anaghị m ahụ ọtụtụ ahịa maka ngwa ndị a maka naanị ndị nwe iphone
Zaghachi Jorge Pineda
Ọ dị mma maka ha ...
Ihe na-agwa m na ha ga-akwụ ụgwọ dị ukwuu n'oge.
Etu esi egwu lotiri mba ahu n’enweghi nsogbu n’ime gam akporo (Bonoloto, Primitiva, Euro Ọtụtụ nde, La Quiniela,)
Etu esi egwu egwuregwu nzuzo bọọlụ ọhụụ na Facebook Messenger na, na mberede, basketball